Mujaahidiinta Al-Qaacida oo la wareegay Magaalo Istiraatiiji ah oo ku taalla dalka Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Feb 20, 2016 217 0
Wararka ka imaanaya dalka Yaman waxay ku waramayaan in Ciidamo katirsan Mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jaziiradda Carabta ay la wareegeen magaalo muhiim ah oo ku teedsan xeebta badda cas ee marta dalka Yaman.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa la wareegay magaalada Axwar oo ah magaalo xeebeed muhiim ah, kadib markii dagaallo kooban ay la galeen maleeshiyaad katirsan xukuumadda taagta daran ee uu hogaamiyo Cabdi Rabbi Haadi Mansuur.
Mujaahidiinta ayaa ku dilay gudaha magaalada saddex Askari, sida ay sheegeen dad la hadlay Tvga France24, waxaana ay isku fidiyeen dhismooyin dowladeed oo ku yaala gudaha magaalada Axwar.
Magaalada ay la wareegeen Mujaahidiinta ayaa kamid ah degmooyinka muhiimka ah ee hoos taga gobolka Abyan ee dhaca koonfurta dalka Yaman, kaas oo lagu xusuusto sanadkii 2011 imaaradii Islaamiga ahayd ee Mujaahidiintu ka taageen.
Al-Qaacida ayaa la wareegeysa mudooyinkii ugu dambeeyey dhul iyo magaalooyin istitaatiiji ah, waxaana xusid mudan iney gacanta ku hayaan magaalada Zinjibaar oo ah xarunta gobolka Abyan, iyo magaalooyinka Waqaar, shaqar iyo deegaano badan, waxaa dhanka kale xusid mudan iney maamulaan magaalada Mukalla oo ah xarunta gobolka Xadaramowt.